Kick-boxing – Mondiaux Jeunes : miditra amin’ny tombana ny FMKB/DA | NewsMada
Kick-boxing – Mondiaux Jeunes : miditra amin’ny tombana ny FMKB/DA
Efa ao anatin’ny fanomanantena tanteraka ireo mpikatroka eo amin’ny taranja kick-boxing. Fanomanana hiatrehana ny fiadiana ny tompondaka eran-tany sokajy zandriny. Hiroso amin’ny fanaovana tombana ireo mpikatroka ny federasiona malagasy.
Mila miady mafy. Araka ny vaovao voaangona teo anivon’ny federasiona malagasin’ny kick-boxing (FMKB/DA), handray anjara amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, sokajy zandriny, isika. Fifaninanana hotanterahin’ny federasiona iraisam-pirenena na Wako any Irlande, ny volana aogositra izao.
Fa mialoha izany, mitohy hatrany ny fanomanantenan’ireo mpikatroka malagasy eo amin’ny sokajy zandriny. Nambaran’ny filohan’ny federasiona, Andrianirina Briand, fa hiroso amin’ny fanaovana tombana ireo mpikatroka ny FMKB/DA ato ho ato. Izany hoe, mety hisy fifaninanana tsapa izany hatrehin’ireo mpikatroka eo amin’ny sokajy zandriny ireo. Miankina amin’izay ihany koa no hamoahana ny lisitry ny ekipa nasionaly ho any Irlande.
Ankoatra izay, voalaza fa miankina tanteraka amin’ny hoenti-manana ihany no hahafahan’ny federasiona mandefa mpikatroka maromaro amin’io fiadiana ny tompondaka eran-tany io.
Anisan’ny mpikatroka nahazoantsika vokatra tsara tamin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany ry Lavakely sy Faratiana. Samy voahosotra ho tompondaka eran-tany, taona 2014, izy mianadahy ireo ary mbola vonona hiaro ny voninahiny ihany koa.